Weerar Lala Beegsaday Askarta Xabashida Itoobiya. – Calamada.com
Weerar Lala Beegsaday Askarta Xabashida Itoobiya.
calamada August 28, 2018 1 min read
Mid kamida saldhigyada Ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Garbahaarey ayaa la kulmay weerar madaafiic ah oo khasaara badan dhaliyay.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada Itoobiya.
Gabaldhicii maanta ayay ciidamada Xarakada Al Shabaab weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhig melleteri oo ciidanka Itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Dad ku sugan Garbahaarey ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda waxaana xigay rasaas ay fureen ciidamada Itoobiyaanka ah ee weerarka lagu qaaday.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in illaa 5 madfac ay gudaha ugaleen saldhigyada ciidamada Itoobiya oo xilligaas saraakiil iyo askar badan ku sugnaayeen.
Madaafiicda lagu weeraray saldhiga Itoobiya ee Gedo ayaa lagu soo warmaayaa in ay haleeleen bartilmaameedyadii gaarka ah ee labeegsaday, taas oo shaki la’aan ka dhigeysa in khasaaraha gaaray uu yahay mid culus.
Weerarkan madaafiicda ah ayaa dhacaya saacado yar kadib markii ciidamada Itoobiya ay gaareen magaalada Garbahaareey kadib safar lagu dhiig bixiyay oo ay kusoo mareen dhul baaxad leh oo Gedo katirsan, Al Shabaab ayaa shalay weeraro dhabbagal ah u dhigtay habka ciidamada Itoobiya xilli ay ku socdaalayeen wadada xiriirisa wadada xiriirisa degmooyinka Buurdhuubo iyo Garbahaarey.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.17-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 17-12-1439 Hijri.